အရမ်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေနဲ့ ရင်ခုန် ချင်စရာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ဗီဒီယို – Let Pan Daily
အရမ်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေနဲ့ ရင်ခုန် ချင်စရာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ဗီဒီယို
photo model အမှူး က တော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ photo model တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးတွေ ကို ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပြီး ချစ်စရော ကာင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေးတွေ ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ photo model တစ်ယောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
ယခုအခါမှာ လည်း ပိုက်ဆံရှိဖို့မ လိုဘူးမောင်လေး ရှိရင်….အမှိုက်ကောက်ရလဲ ဖစ်တယ်နော် ဆိုပြီး ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုရော မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုပါ အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူမကတော့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေရဲ့ ရှေ့ကို ချပြလေ့ရှိပါတယ်။
photo model အမႉး က ေတာ့ လက္ရွိမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ ရွိေနတဲ့ photo model တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္ကို တင္ေပးေလ့ရွိတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။အမိုက္စားဖက္ရွင္ေလးေတြ အလန္းစား ဖက္ရွင္ေလးေတြ ကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး ခ်စ္စေရာ ကာင္းလြန္း တဲ့ အၿပဳံးေလးေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူမကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အခိုင္အမာရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ photo model တစ္ေယာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။.
စစ်ကောင်စီက ကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေပွဲကို သိန်း ၈၀ ကျော် ဖြင့် သွားရောက် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ယုန်လေး
နိုင်ငံခြားသူ လို့ အထင် မှားလောက်အောင် အနီရောင် ဖက်ရှင် နဲ့ လန်း လွန်း နေတဲ့ အိချောပို